Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Elementary OS 0.2 Luna | Kubva kuLinux
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Elementary OS 0.2 Luna
IvanLinux | | Chitarisiko / Kuita munhu
Ndinoona kuti yangu yekutanga posvo yakagamuchirwa kwazvo, ndichaedza kuramba ndichitumira zvinhu zvinobatsira uye imwe posvo inosekesa ... Ndinoziva kuti yanonoka asi ndinokuunzira matipi eElementary OS 🙂
5 5. Isa compression mafomu
6 6. Isa mamwe mapakeji uye mamaneja ekugadzirisa
7 7. Tsvaga zvimwe zvinoshandiswa muSoftware Center
8 8 Kugadziriswa
Zvichida kuti mushure mekusunungurwa Elementary OS Luna mitsva mitsva yakaonekwa pamapakeji akasiyana ayo mufananidzo weIO unogoverwa neElementary timu unouya nawo.
Neichi chikonzero, mushure mekupedza kuisirwa zvinogara zvichikurudzirwa kumhanya iyo Gadziridza maneja kana nekumhanyisa zvinotevera kubva kuchiteshi:
Kuwanikwa Tsigiro Yemutauro kubva kuSystem Zvirongwa uye kubva ipapo iwe uchakwanisa kuwedzera mutauro waunoda.
Nekuda kwenyaya dzepamutemo, Elementary OS haigone kusanganisira nekushomeka akateedzana mapakeji ayo, kune rumwe rutivi, akakosha kune chero mushandisi: macodec ekuridza MP3, WMV kana maDVD akavharirwa, mamwe mafonti (anonyanya kushandiswa muWindows), Flash madhiraivha epamutemo (kushandisa zvirinani mabasa e3D kana Wi-Fi), nezvimwe.
Neraki, iyo Elementary OS inosimudza inobvumidza iwe kuisa zvese izvi kubva pakutanga. Iwe chete unofanirwa kugonesa iyo sarudzo mune imwe yeanomisikidza skrini.
Mamwe makadhi emifananidzo eATI haashande neElementary OS kunze kwekunge iwe uchishandisa ATI's "legacy" madhiraivha uye kudzikisira pasi server X. Kana zvichidikanwa, iwe uchakurumidza kuziva kuti nei Elementary OS isinga bhure zvakanaka. Kuti uigadzirise, mhanyisa unotevera mirairo:
Kana iwe uri mumwe wevaya vasingakwanise kurarama vasina kuteerera MP3, M4A uye mamwe mafomati epamutemo, uyezve iwe haugone kurarama munyika ino ine hutsinye usingakwanise kutamba mavhidhiyo ako muMP4, WMV nemamwe mafomati epamutemo, pane mhinduro yakapusa:
Kuwedzera encrypted DVD rutsigiro (ese "mavambo"), ndakavhura terminal ndokutaipa zvinotevera:
Playdeb, iyo yemitambo reposvo yeUbuntu / Elemntary OS, yakagadzirwa nevanhu vamwe chete vakatipa getdeb.net, chinangwa cheiyo purojekiti kupa vashandisi veUbuntu nzvimbo isiri yepamutemo neshanduro dzazvino dzemitambo.
5. Isa compression mafomu
6. Isa mamwe mapakeji uye mamaneja ekugadzirisa
Kuisa: Tsvaga Software Center: Synaptic. Zvikasadaro, iwe unogona kuisa unotevera kuraira mune terminal ...
Kuisa: Tsvaga muSoftware Center: aptitude. Zvikasadaro, iwe unogona kuisa unotevera kuraira mune terminal ...
7. Tsvaga zvimwe zvinoshandiswa muSoftware Center
Kana iwe ukasakwanisa kuwana application yekuita zvaunoda kana iwe usingade maficha anouya nekutadza, unogona kuenda kuSoftware Center.
Firefox, web browser (ini handikurudzire Chromium kana Google Chrome)
LibreOffice, Hofisi suite (MS Office asi yemahara)
Wedzera iyo Elementary Gadziriso Nharaunda PPA
Elementary Tweaks muchidimbu ndizvo zvaunogona kugadzirisa zvakanyanya neElementary
Anobatsira kwazvo kuvhura! Isa iyo hauzozvidemba 😉
Isa Themes, Icons nezvimwe ...
Yepamberi kugadzirisa, jelly-senge hwindo mhedzisiro
Kana iwe uchida unogona kusvetuka izvi kana kuyedza zvishoma uye uzviite 😉
Kana tangoiswa, isu tinopfiga chikamu uye tinya pane iyo nati uye sarudza Xfce Session uye tanga chikamu.
Isu tinotanga neakasarudzika magadziriso (Mira padiki pantheon uye xfce xD)
Iye zvino taisa kwin:
Uye kana iwe uchida iwe unogona kuisa Dolphin neAreka (Yakakurudzirwa):
Isu tinopinda kurongedza uye kumisikidza kuSession uye Kutanga mune yekushandisa autostart tebhu
Uye isu tinowedzera zvinotevera zvinoshandiswa:
Isu tinovanza iwo mapaneru:
Isu tinovhara uye tinopinda mukati.
Uye shongedza kune zvatinoda:
Kuchinja sarudzo dze kwin:
ndozvanga zvakaita yangu 😛
Iyi ndiyo pamakumbo angu:
GPU: Intel Corporation Atom processor D4xx / D5xx / N4xx / N5xx Yakabatanidzwa Graphics Mutongi (rev 02)
Muenzaniso: Aspire One 257
Matipi eElementary: http://www.elementaryupdate.com/ (Chirungu)
Ndinovimba waifarira, usakanganwa kunditevera pa twitter, senge, taura uye nyorera xD...
Pinda apa uye chiyera zvandatumira: http://strawpoll.me/703848
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Elementary OS 0.2 Luna
Nei ichiita sekopi & kunama zvekuita mushure mekuisa ubuntu 12.04?
Musoro unogona kuve kopi-kunama, asi zvirimo, kwete.
ElementaryOS yakanaka distro, inokurumidza uye inoyevedza
Ini pachangu, ingori yakatarwa Ubuntu uye hapana chimwe chinhu! : /
Ndinotya kuti wakanganisa zvachose, kare ndakamboshandisa Ubuntu (ini ndakanyatsorega kuishandisa mushanduro 12.04, mushure mekuodzwa mwoyo kwekubatana, kunyangwe hazvo zviripo, mumwe haaroore nharaunda, ini ndakaisa vamwe) uyezve ndaifanira shandisa lap ine mashoma performance, kushamisika kwangu kwaive kuti Ubuntu munzvimbo dzakasiyana dzainonoka zvinotyisa (kubatana kwakakundwa nezvakawanda zvakajeka), kushamisika kwangu pakuisa eos yaive yakatsiga uye inomhanya nharaunda, tisingataure kuti nharaunda yakanyanyisa kunaka kupfuura gnome kubatana uye kde al apo uchichengetedza mushandisi-inoshamwaridzika nyore.
Pindura kuna juanjp
Iwe uri fan of iCarly kana chero chimwe chigadzirwa cheDan Schnneider? Nekuti nguva dzose, mune izvo zvinoratidza kuti vanoona paNick, vanotsiva maapuro nemapere.
Kwete, kutanga nezvazvo, ini handizive kuti iCarly kana Dan ndeyei, inyaya yekunongedzera kunyangwe zvisingaite senge, nekuti ini ndakatoedza Elementary OS Luna, pakutanga kuona ndakashamisika asi pandakaona izvo iyo yaive yakavakirwa pa uye kernel (yakanyanyisa kupererwa nenguva) yakasara ichiva icho chandaifunga kuti changa chiri kuedza kuva, kuve "yakavhurika uye shandisa." Pamusoro pezvo, kuve iye uye kusave kopi yemac nenzira yekunyepedzera seUkubatana kuri, kana Kubatana kuchiteedzera pfungwa dzeMac senge Dock, iyo nekuiisa kuruboshwe uye nekuchinja chitarisiko ichihwande chaizvo, asi iyo pfungwa ndeyake, nezvimwe, nezvimwe. Kana Elementary yakandifadza, nekuti kwandiri Pear yakagadzwa, uye nenzira yakananga seMacOSX inoshanda, haisi Mac, ndinoziva, asi kushandiswa ndiko kunokosha, mushure mekuti OSX iri dhizaini huru, semuenzaniso iyo Launchpad kana kufumura, izvo zvandanga ndisingazive kuti chaive chii uye nekutenda kuna Pear ndave kuchiziva izvozvi, uye zvakakosha, uye handizvizive. Ndisati ndatsvaga desktop kuti ndikwanise kuparidza Linux ndisingaite kuti ndinzwe kunyara (mune GUI maitiro) nekuti ini ndatoiwana.
Zvino, maStallmantosos, maOpen Source maPuritan, matrolls, nezvimwe vachandirova muhuro. etc. Zvakanaka, usazvinetse, ini handisi kuzopindura. Kana ava vatsvene vasina chimwe chinhu, irusununguko, hongu, zvinopesana asi ichokwadi, saka regai vamwe vasarudze, mirai kutsamwa kana musingade chimwe chinhu, regai Ubuntu iite mapurojekiti ayo. Uye pakupedzisira zvingave zvakanaka kana Elementary akabatana ne Pear, Libre Hofisi neOpen Office, nezvimwe. etc. uye yakareba etc. Panzvimbo pe "forogo", "batanidza", "batanidza", "batanidza"….
Zvakanaka, pearOS yakaguma kuvapo ...
Ok, eOS ine yechinyakare software, asi muLinux iro harisi iro dambudziko hombe, kunyanya izvo zvandinoita nguva dzose pakuisa eos kugadzirisa kernel kune yazvino vhezheni, uye iyo yakavakirwa paUbuntu 12.04 LTS mukana wakakura sezvo ivo present inogadziridza pasina kuita fomati yekuisa vhezheni nyowani
Usaise iwo amd anezvinotyairwa madhiraivha, haashande nemazvo ne gala, ihombe bug.
Sezvatakambotaura hermano Stallman:
Usatenge kubva kuATI.
Hama stallman vaizokuudza zvakaipisisa zvinhu nezve nvidia XD, kana paine, angati tenga intel lol
Sezvo ini ndisingakwanise kutenga Leemote laptop saka ndichafanirwa kuvimba neIntel chipset (NVIDIA inodhura uye ini ndinofarira kuwana zvakanakisa kubva kune processor processor uye Intel mifananidzo).
PS: Tenga Gigabyte mabhodhi, kwete Foxconn's.
Gigabyte, Asus kana Asrock.
Ivo vatatu havana kumbokundikana ini (kunyangwe iwo mamodheru ane dhizaini ne AMD).
SaStallman akataura izvozvo !!!!!!! Ndatenda mwari maita basa ini ndatova nechikonzero chisina musoro chekumuuraya.
Ivan Molina akadaro
Asi iwe unogona kushandisa Kwin 😉
Pindura kuna Ivan Molina
Ini handidi kuve bato pooper, asi urikushandisa Iceweasel ESR? Vhezheni 25 (rebazi rebazi) inomhanya kunge chishongo. Nechinhu chemifananidzo cheATI / AMD, ndine ndangariro dzakaipa kwazvo pandakanga ndichishandisa Windows XP uye kadhi yevhidhiyo yeATI yatsva.
Ndiine KDE, ini ndakazopedzisira ndawana rugare rwangu rwe desktop-hopping. XFCE inoshandawo seKDE, asi ini ndaizongoishandisa kumaPC ane kadhi yemifananidzo iyo isingatomboshandira kutamba Half-Life 1.
Uye nenzira, ndatenda nekutora nguva yekuita yako yekutanga Elementary QT. Ngatione kana ndichigona kuita Elementary KDE.
Zvido zvako mirairo xDD
Ini ndichagadzira posvo yekuita: Elementary OS KDE
Kana iri Iceweasel, ndaneta nekutumira data kuMozilla xD (ini ndanga ndichangobva kushandisa Debian uye ndakadanana neIceweasel)
Mune mhaka yangu, Iceweasel yaive rudo pakutanga kuona. Iceweasel inozove iyo Firefox yandaigara ndichirota nezvayo, pamwe nekundipa runyararo rwepfungwa maererano nedata rangu.
Bazi rekuburitsa rakavandudza zvakanyanya maererano nekuenderana neFirefox plugins, saka iri kuita zvishamiso.
Kana ivo vakashambadza iyo posvo iri mune ongororo (yangu), chichava kushamisika iwe neako KDE 😉
Zvakanaka Elementary yangu KDE ichiri mubeta. Panguva ino, iri muchikamu chepurasitiki.
Pane mumwe munhu angandikurudzira distro ine yakanaka amd tsigiro, ini ndine HD8470 kadhi rakabatanidzwa uye ine ubuntu 12.04.4 lts haina kutanga sisitimu painogadziridza kernel ..
Manjaro yakareba iyo kernel 3.12 mune yakagadzika iyo inonzi inounza zvigadziriso zveamd, iyo kernel yakaiswa nemirairo yakapusa uye wozosarudza neiyo kernel yekutanga.
iyo kernel yachembera kwazvo, kukadhi rako, uchafanirwa kushandisa ubuntu 13.10, ine 3.11.
Kutenda neruzivo pandev uye jomada
Uye haina Elementary OS inofanirwa kunge iri yevashandisi vemakomputa? Nei mushandisi wekutanga achifanira kumhanyisa iwo ese mirairo?
Ndekupi kuri nyore?
Ini handioni kuti zvakaoma sei kunyora mashoma mirairo 😉
Ini handina kuona kuti chero kwavanoreva Elementary sedistro yemakomputa novices, pamwe newbies munyika ino yeGNU / Linux hongu.
Asi zvemakomputa novices ini handifunge kuti pane chero distro uye haufanire kuenda kure zvakanyanya, nguva pfupi yadarika vakaita chinyorwa muylinux nezve kuoma kwazvakaita kune vamwe vanhu kuwana iyo Ubuntu kurodha bhatani pane yavo peji.
Mune chiitiko chakasiiwa neOSX maitiro echimiro. Asi kana iwe uchida chimwe chinhu chakanyanya kuoma, ini ndinokurudzira kuti iwe udzidze kuvaka yako distro neLinux Kubva kuKutanga kana kushandisa Gentoo.
Izvo chaizvo ndizvo zvandinovenga nezveLinux, iwe unofanirwa kutambisa nguva kuisa akawanda mapurogiramu, mazhinji acho anogona kunge atove akaverengerwa.
Iyo poindi ndeyekuti ElementaryOS yatogadzirira kushandisa. Izvi zvinouya gare gare kana iwe uchida ...
@elav Warevesa, asi sei kuisa mamwe mapurogiramu asingazobatsire munhu wese uye anongowedzera huremu hweOS? Ini ndinofunga kuti Mr. @pedro vane nzira isiriyo yekufunga nezveGNU / Linux, handiti?
Ndatenda nekupindura pane yangu posvo elav!
Ruvengo irworwo rwakavakirwa pakusaziva kwako uye nekusaziva (senge dzinenge ruvengo rwese) .Kana ini ndichida chimwe chinhu chine zvese zvaunoda, dhawunirodha openSUSE, iri DVD yakazara (4.7) unoiisa zvachose uye ndinokahadzika kuti urikushaya chimwe chinhu.
@Vashandi Ha ini ndinoreva huremu «4.7» GB mashoma, handiti? xD
Ndatenda nekutaura pane yangu Staff posvo!
Kana iyo Debian Wheezy DVD1. Hapana chinhu chiri nani kupfuura icho.
Meh, kana iwe usiri kuda iyo Mushure mekuisa yakadai, zvirinani ndikuratidze kuti uise Russian Fedora Remix, inova forogo yeFedora iyo iwe yausingade kuti uite Mushure mekuisa.
Lol, mumawindows zvakafanana, kuti kana iyo vlc, kuti kana iyo itunes, kuti kana iyo Microsoft office, iyo kana macodecs ezvakadaro uye epashure, kuti kana iyo antivirus ...
Neraki antivirus mu linux kwete ee
Izvo zvakafanana, chete izvo muLinux mazhinji acho atouya mumazororo, pasina kutarisa pakati peSoftonic uye shit yerudzi irworwo.
Pandaive newindows uye linux, ndakapotsa xD terminal
Kwazisai uye nekutenda nekupindura cookie!
Hapana chinhu chiri nani kupfuura chinogumira. Kunyangwe iyo Windows rairo yekukurumidza inouya padyo nezvitsitsinho zvako.
Pakati peSoftonic slops uye repo repamutemo, ini ndinozendamira zororo.
Ndanga ndichishandisa elementary OS kwenguva yakati asi ndine mamwe matambudziko nazvo pandinoshandisa laptop yangu kudamburwa kubva mundiro, inova isina kugadzikana uye inononoka uye pamwe imhaka yekuti bhatiri iri rekare uye haripe kushanda kwakakwana.
Ndiri kufunga nezve kutenga laptop nyowani, ndinoda kuti ive ne 11.6 ″ skrini uye i3 kana i5 processor. Ndeupi waunokurudzira ???
Zvichida uyu mubvunzo hauna zvakawanda zvekuita nemusoro wenyaya yacho, asi seimwe meseji inotaura nezveLemote uye Hardware, ndosaka ndafunga kuzviita.
Wakamboedza kuisa jupita here? saka zvirinani kuti iwe ungazive kana processor yako iri pa100, zvakanaka, zvirinyore kumisikidza iyo kuchengetedza bhatiri kana kuwedzera mashandiro.
Elementary OS ndiyo distro yandaifarira zvakanyanya kusvika zvino. Izvo zvinongouya neyakajairika, uye iwe sarudza chekuisa pairi. Iko kutaridzika kunoshamisa, pachezvangu ini handioni kukosha kwekuisa imwe nzvimbo yakajeka.
Ndakaita zvese zvese kuburikidza neiyo software centre kubva pane zvandakaverenga pa elementaryupdate.com, ndichitora mukana wekuti ini ndanga ndichitsvaga nzira yekuisa kudzikisira nekukudza mabhatani senge muWindows.
Midori (bhurawuza racho rinosanganisirwa) inzvimbo yezuva nezuva, saka ndakaisa Chrome (kwandinowana data rangu rese rakaenderana) .. asi posvo haikurudziri. Iko kune chero chikonzero kana chimwe chinhu kune iyo yakachena chishuwo iwe chaunokurudzira Firefox?
Nekuti zvinobva kuGoogle ¬_¬ uye ndiani anoziva zvinogona kuitwa neGoogle, ini zvirinani kukurudzira Iceweasel
Kana Chromium (usingapinde mukati neako GMail, hongu). Opera yakatorasa rutsigiro rwayo rweGNU / Linux (iyo yazvino vhezheni haiwanikwe iyo penguin, saka ndinochengeta Opera 12.16 seyeuchidzo kudzamara vaita vhezheni itsva yeGNU / Linux uye inouya neOpera Link).
Uye kana isu tik fork Firefox ine blink injini uye tigoita Mahara Software! ok ok, ndakafara chaizvo xD
Parizvino, chinhu chepedyo pane icho Qupzilla, asi ini ndinoona kuti mhedzisiro yacho yauraya.
Ndiri kushandisa Iceweasel uye Firefox yakawanda kupfuura Chromium / Chrome. Dambudziko harisi reGoogle chete, asi mune yekuisa Chromium / Chrome paDebian, zvinogona kunge usingaone mavhidhiyo eHTML5 uye mamwe mavhidhiyo eFlash zvakanaka (kana iwe usingazive maitiro ekugadzirisa iyo kugadzirisa izvo zvikanganiso).
Dr. Byte akadaro
Kwakanaka, desktop yako yaitaridzika kunge yakanaka kwazvo, kunyange ini ndakaedzawo Elementary OS muUSB Live uye ndakafunga kuiisa pamakumbo angu sezvo isina kundikurudzira kunyangwe ichitaridzika kunge yakanaka kwazvo lol, nekugadzira ini zvirinani kuisa Pear OS uye kana iri ndezve mafomu, kumisikidzwa uye nevamwe kudzivirira matanho aya zvirinani ini ndinoisa Linux Mint.
Chinhu chandisingade nezve Pear OS uye L-Mint ndechekuti vane Adobe Flash Player yakaiswa
Ndine dambudziko rekuisa Elementar OS. Screen yacho inoita kunge "pixelated" Ini handikwanise kuitsanangura mushe, pane mitsetse michena kwese kwese chidzitiro. Iyo OS iri kufamba mushe uye yakanaka, iro chete dambudziko randinaro nderekuti. Chero zano?
Pindura kuna Romer
Luis Siller akadaro
Mhoro shamwari, maita basa rekutumira, hei ini ndoda kukubvunza kuti sei pandinoisa OS ini handina wifi, munoona, mutyairi wangu ndiRalink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter, handisi newbie mulinux , Ndanga ndichizvishandisa kwemakore uye kugovera uku kunoratidzika kwandiri Kwakanaka, ndinokumbira iwe kuti undibatsire kugadzirisa dambudziko rangu, ndinokutendai zvakanyanya pamberi. Nenzira, kurodha pasi uye usb zvakanaka, harisi dambudziko neziso, nekuti pane imwe komputa ndakarishandisa pasina matambudziko, ini ndakaedza pamwe ne32 ne64 mabheti.
Pindura kuna Luis Siller
Wakamboedza kuisa iyo nyowani kernel yakabatana neethernet?
playdeb uye getdeb repositories haisisina kugadzikana. Iyo purojekiti yakamira kuvandudza kwekanguva ikozvino inokonzera matambudziko. usachiisa
Mhoroi, ini pachangu ndaifarira ElementaryOS zvakanyanya, asi ndine matambudziko maviri; imwe, ini handikwanise kufambisa windows ne alt + tinya (ndanga ndajaira izvi), uye maviri, nei ndisingakwanise kuisa zvidhori nemafaira pakombuta? uye ndinozviita sei?
Pindura kuna Yair
gadza elemenatryosluna uye pandakatangazve mangwanani akatevera ndakawana iwo meseji.
elementaryosluna desingblacksystem-system-chigadzirwa-Zita tty
elementaryosluna desingblacksystem-system-chigadzirwa-Zita rekupinda:
handidi kuti ndibvumire iyo system
iwe unogona kundiitira iwe hukuru hukuru hwekundibatsira plesse.
Pindura kune desingblacksystem
Ino inguva yekutanga kuti ndiise chepuraimari uye zvakandibata kuti pandakadzvanya bhatani repamushonga hapana zvayakaita, zvakajairika zvinokupa sarudzo kuti ugadzire faira nyowani, dhairekitori nezvimwe,
izvi zvakajairika mupuraimari?
Chii chandingaite kuti ndiipe iwo mabasa andisingazive nezvako asi ini ndinonzwa kusanzwisisika kuita sekutambisa bhatani hehe
Ndisati ndatenda zvikuru.
Iniwo ndiri hafu nyowani munyaya iyi, uye semunhu wese wandinoda kuenda ndichiisa ruoko rwangu nekudzidza.
Kunetsekana kwako uku kwanga kuri kwanguwo, sezvo mupanthe pacharo hazvigoneke kugonesa desktop, zvirinani kuti ndakazosvika pakaperera mushure memazuva ndichitsvaga chimwe chinhu. Ndakawana nzira inoshanda pano. http://www.hongkiat.com/blog/elementary-os-luna-tips/
Icho hachisi chimwe chinhu uye hapana chakaderera pane kumhanya Nautilus pamwechete kuitira kuti igone desktop. Inoshanda uye iwe unogona kuisa yekutanga theme, kunyangwe kana isingatarise zvakafanana.
Kana iwe uchiziva nezve chimwe chinhu chiri nani, chitaure icho. Iyo distro yakanaka uye zvinonyadzisa kuti inorasikirwa kudivi iro.
Ndatenda nemhinduro, nekuda kwehardware zvikonzero zvemakumbo angu chubhu ndinofanira kubvisa nekuisa xubuntu asi ndiri kufunga zvakanyanya nezve kuwana pc yakatsaurirwa kueOS, uye ruzivo rwako runondibatsira zvakanyanya 😀
Mumwe munhu anogona kundikurudzira brand, laptop modhi inowirirana chaizvo neeOS, pawebhusaiti yepamutemo yavanoratidza Luna nelenovo, iwe unofunga kuti pane chero imwe mhando inoenderana, isina kukundikana kwevhidhiyo, fluidity, mashandiro acho?
Iyo lenovo inowanzo kuve yakakwira mutengo, uye kana paine chero imwe mhando yakaenzana kana zvirinani nemaeOs andingade kuziva.
Ndine Hp g42 amd dual musimboti asi ndeyechinyakare nekuda kwekushandisa uye inopisa chaizvo, kunze kwekuti yaive nezvikanganiso pakushandisa eOS hotcorners, zvigunwe zvewindow zvaive zvisina kujeka. Ndokusaka ndichatenga imwe nyowani.
Ndatenda pamberi 😀
Shamwari ini ndatoisa yekutanga os luna asi dambudziko nderekuti rinonyanya kunonoka. Zvinotaridza kusanzwisisika kwandiri kuti ndingaone sei kuti hapana chandiri kushaya.Ndiko kekutanga nguva pandinoisa Linux.
Mhoro vanhu! Ini ndichangobva kuisa EOS mutsamba yangu uye ndine dambudziko, ndine Samsung TV yakabatana ne hdmi uye inozviziva asi iyo TV inondiratidza meseji yekuti "haigamuchire chiratidzo", zvakaitika kune mumwe munhu?
Mhoroi, nhasi ini ndichangoisa Elementary OS uye ndine mubvunzo unotevera:
Ini ndinoshandisa mamonitor maviri (HDMI neVGA) dambudziko nderekuti mushure mekuisa password yangu uye kudzvanya kupinda, chimwe chezvikwiriso chakasviba uye chimwe chichena….
Ini ndinoshandisa iyo ASUS RADEON HD 6570 graphic kadhi.
Ndinovimba munogona kundibatsira, Ndatenda.
Federico Pereyra akadaro
Ini handikwanise kutamba mp3, ndakatevera zvawataura uye zvakandikandira iyo meseji «chinodiwa GStreamer chinongedzo hachina kuiswa», zvakadaro sisitimu iri kuvandudzwa izvozvi, asi kungoti zvimwe chiri chimwe chinhu, ndinokusiira mubvunzo , yakanaka kwazvo iyo info, ndatenda zvikuru.
Pindura kuna Federico Pereyra
Ini ndichangoisa ELEMENATARY OS uye zvese mapakeji aunokurudzira. Sezvo ini ndiri mutsva ku linux, ndinokubvunza.
ndingaisa sei maapplication, maforodha, mafaera, nezvimwe .. pane desktop. Izvo zvinongondisiya ndiri padoko.
Uye mushure mekurohwa kwakanyanya iwe wakarova chakakora chegumi neshanu semubairo wekufamba kwakawanda
Maitiro ekugadzirisa dambudziko rekuti OS mune yangu HP laptop haina kuona iyo WIFI network kadhi, inoita kunge yakabviswa. Ndeipi ingave codec yekuisa? Ndatenda
Federico Gustavoo Pereyra akadaro
Mhinduro inogona kunge iri yekubatanidza iyo pc kune internet kuburikidza neEthernet uye nekuipa iyo yekuvandudza yevatyairi, saka iwo ari pawifi board aizoiswa otomatiki, edza izvo uye kana zvikasashanda tinogona kuwana imwe mhinduro, asi izvi zvingave zviri nyore. Mufaro
Pindura kuna Federico Gustavoo Pereyra
Yakashata Ortiz akadaro
Ndine dambudziko rakafanana pese pandinogadziridza eOS. Ini ndazvigadzirisa zvine mwero kuisa / kuisa i-wi-fi adapter kuburikidza neusb ... ipapo mune zvido zvesisitimu ndinotarisa icon yeakawedzera maDrivers uye rega rivaone uye mushure meizvozvo riite. Kune izvi, yekubatanidza internet inodikanwa sezvo ini ndisina ethernet ndosaka ndichishandisa iyo yekunze adapta. Mushure meizvozvo ndinogona kubatanidza, kunyange dzimwe nguva ndine matambudziko ekubatanidza. Kadhi rangu ndiro Broadcom. eOS inzira yakanaka. Ndisati ndashandisa Pear OS x uye ini ndakaona kuti yaivewo nematambudziko mazhinji saka kunyangwe ini ndisiri nyanzvi ini ndinofarira kuyedza kugadzirisa zvinhu ndisina kushandisa iyo terminal. Ini ndinoshandisa netbook rangu seinternet server kuyedza mamwe akavhurika sosi masystem (http://clavius.tij.uia.mx) uye ini ndakaisa unenge hwese hunhu hweUbuntu uye eOS ini yandaisada asi ikozvino ndanyatsogadzikana neiyi distro.
Pindura kuna Adalid Ortiz
Mhoroi, maita basa nemupiro wenyu, ndafunga kutama kubva paWindows kwechinguva (ndinotarisira) ndokusarudza Elementary seye chete system. Parizvino zvese zvinoshanda mushe kunze kwekubatana kwangu kwewifi kuri kugara kwakabatana uye izvo zvinosvota. Ndibatsire ini kugadzirisa izvi ndapota. Chekutanga pane zvese, Thanks.!
Ndine Acer V5 laptop. Intel Core i3.
Mubvunzo, ndingaisa sei madhiraivha eiyo wifi antenna? Ini handikwanise kubatanidza kune internet
Pindura ku robertp
Mhoroi, ndanga ndichiedza kuisa iyo jelly-senge windows uye handisi kuwana masystem emushandisi mu xfce modhi, unoti enda kumasettings asi handisi kuiona chero kupi, ndinosvika sei pahwindo iro?
HI, yakanaka posvo, asi ndiri kunetseka neiyo jelly-senge windows. Zvinoitika kuti ini handisi kuwana iyo menyu iyo Session uye Starup nekuti ini handizive kwekuenda kana iwe uchienda kunogadziriswa, unogona kundibatsira?
Mhoroi, akati wandei mapoinzi, ekutanga-tweaks anondiudza kuti haapo, kana haizonditenderi kuti ndiiise. Iko zvakare kune mubvunzo wekuti ungawana sei iyo Session uye mushandisi chinhu. Nekuti kurongeka kwese hakushandi kwandiri, ndinofanira kuita kana kuisa chimwe chinhu?
Ndibatsire, ndinoda kunyatsoisa jelly windows
Zvakanaka, ndatenda nekutumira, asi ini ndiri mutsva kwazvo kune yekutanga uye ini handizive zvakawanda nezveLinux.Ndingade kana paine vamwe vevanhu vanoona iyi posvo vachandibatsira kuti ndinzwisise zvishoma nezve iyo inoshanda sisitimu.
Ini ndaida iyi OS, ndatenda neiyi yekuisa. Chero nguva kana chimwe chinhu chapera kumisikidza zvakanaka kuve neruzivo rwehunyanzvi. Mufaro!
Pindura kuna AlonsoRoco
Luis Villalobos akadaro
Mhoroi, ndingade kuenderera ndichishandisa Elementary OS, chero bedzi ini ndaigona kuisa kunyorera ndisina internet yekubatanidza, mumwe munhu angandiudza maitiro ekuita iri basa?
Pindura kuna Luis Villalobos
Maitiro ekuisa Ubuntu 13.10 Saucy Salamander nhanho nhanho